Azonao ambaranao ahy ve ny fomba fiasan'ny rindranasa mba hanatsarana ny fifamoivoizan'ny tranonkala?
Amin'izao fotoana izao, maro loatra ireo webmasters manan-talenta sy tompon'ny orinasa an-tserasera matetika mifantoka bebe kokoa amin'ny pejy Search Engine Optimization ao amin'ny pejy (ohatra, ny teny fanalahidy, ny tranokala tranokala, sns.). Ary matetika loatra izy ireo dia tsy mandoa ny fiheverana ny fomba fiasan'ny backlinks ho an'ny fampisehoana ankapobeny. Raha manao izany izy ireo, dia manadino ny maha-zava-dehibe ny backlinks - satria mino ny ankamaroan'ireo manam-pahaizana momba ny indostria fa ny 80% -n'ny habeny amin'ny habaka no mijery ny kalitao avo lenta amin'ny fomba fijerin'ny algorithm maotera amin'ny Google.Noho izany, mamaritra ny fomba fiasan'ny rindranasa ho an'ny tranonkalanao, azontsika atao ny manaiky fa ny fanolorana azy ireo avy amin'ny loharanom-baovao hafa manondro ny tranokalanao dia manatsara mivantana ny fisehoana an-tserasera amin'ny fikarohana. Izany no antony mahatonga ny fanorenana rohy, dia matetika no heverina ho fahafahana be loatra ka handalo izany.
Na dia izany aza, misy olona sasany mbola miaro ny fireneny amin'ny fananganana backlinks aktiv. Raha toa ka mitranga aminao koa izany, dia misy ny fototry ny fomba fiasan'ny rindranasa hanatsarana ny fifamoivoizan'ny tranonkala. Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy dia misy rohy mampifandray pejy roa samihafa. Mazava ho azy, azonao atao ny manana rohy anatiny mifandray amin'ny tranonkala samihafa ao amin'ny tranonkalanao manokana (ho an'ny fitaovana tsara kokoa sy ny tanjon'ny fanoratana). Na izany na tsy izany, nahoana isika no tokony hikarakara zavatra be dia be toy izany? Satria, raha jerena ny fitaovam-pikarohana lehibe (toa an'i Google, sy Bing ary Yahoo), ny backlinks dia mampiseho ny hasin'ny tranonkala sy ny mahasoa ho an'ny olona. Izany no antony mahatonga ny fanatsarana ny lisitry ny backlink ho toy ny mari-pamantarana mavesa-danja ho an'ireo fitaovam-pitadiavana mba ahafahan'ny tranonkala "atolotro" ho an'ny mpihaino marobe kokoa, amin'ny fiheverana fa tokony ho sarobidy sy ilaina ho an'ny olona izany. Ary tsarovy - misy ireo karazan-tsivana maromaro fototra izay mamaritra ny kalitaony. Ohatra, ny loharano azo avy amin'ny loharanom-baovao iray manan-danja amin'ny indostrian'ny tranokalanao dia hanana lanja bebe kokoa. Amin'izany, ireo izay avy amin'ny vohikalan'ny antoko fahatelo amin'ny PR (laharana ambony), DA (tompon'andraikitry ny sehatra), ary ny PA (fahefana) dia ho sarobidy kokoa.
Noho izany, inona no fomba tsara indrindra ahafahana manova backlinks kalitao manondro ny tranonkalanao ho an'ny toerana ambony kokoa ao amin'ny lisitry ny fikarohana? Mazava ho azy fa midika izany fa efa manana rohy vitsivitsy manondro ny votoatin'ny pejy na blôginao ianao. Na izany aza, raha ny tena izy, dia tsy ho ampy mihitsy ny handinihana tsara ny fisian'ny fifaninanana fikarohana. Midika izany fa tsara kokoa ny manao asa am-pahamendrehana ary manamboatra lamàtra bebe kokoa amin'ny alàlan'ny tena. Toy izao ny fomba:
mpitsikilo momba ny mombamomba ny mpanaraka anao amin'ny fampiasana fitaovana fikarohana amin'ny Internet toy ny Majestic SEO, Semalt Analyzer, na Open Site Explorer hanamboarana ny tsara indrindra amin'ny tranonkalanao manokana.
andramo ny famandrihana an-tserasera - aza misalasala manantona fotoana vitsivitsy hanoratanao votoaty ho an'ny tranonkala hafa hafa mba ahafahana mamadika rohy mankany amin'ny tranonkalanao ho setrin'izany.
mitandrema amin'ny zava-drehetra azo itokisana mba hamoahana famoaham-baovao amin'ny famoahana sy fanamafisana ny isa.
dia lasa mavitrika amin'ny media sosialy hanatsarana ny fahefana lehibe ao amin'ny tranonkalanao, hampiseho ny fahaizanao matihanina, ary hanangona backlinks sasany amin'ny fotoana iray ihany Source .